Warar - Hordhac Mashiinka
Farsamaynta farsamadu waa nooc geedi socod guud oo dhan ah. Farsamaynta farsamaysan ee halkan lagu xusay waxay si gaar ah u tilmaamaysaa hababka loo adeegsado daaweynta dusha sare. Waxaa jira qayb isdhaaf ah oo ku saabsan habka farsamada ee "Habka sameynta", waxaadna u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato farqiga u dhexeeya.
Waxaa jira noocyo badan oo mishiin ah. Hababka wax soo saarka dhaqameedku waa wax aan ka badnayn leexashada, shiididda, qorshaynta, shiida, feedhida, goynta, qodista, iwm. Inta badan qaabab dhaqameedkan ayaa si tartiib tartiib ah loo dhexgeliyaa oo ay socodsiiyaan xarumaha farsamaynta CNC ee saxda ah Qaar ka mid ah habab farsamo oo cusub ayaa si tartiib tartiib ah loo kobciyaa. Booska buugani wuu kooban yahay, sidaa darteed halkan kuma wada wada qori doono. Kaliya waxaan ka soo saari doonaa farsamooyinka ku lug leh ku dhaqanka naqshadeynta naqshadeeyayaasha, sida ciideynta, sawirka siligga, nadiifinta, shaabadda, iyo rogista.
Sifooyinka aaladaha lagu farsameeyo waxaa lagu soo koobi karaa: xawaare sare, hufnaan sare iyo saxnaan sare.
Hababka geedi socodka makiinadaha kala duwan, astaamahooda kala duwan ayaa lagu muujiyay jadwalka soo socda:
Farshaxanimo macnaheedu waa
Si aan macquul ahayn ayaa loo dooran karaa inta udhaxeysa kala duwanaanta kala duwan, si loo helo qallafsanaan kala duwan oo ka mid ah dusha sare ee shaqada
Waxay yareyn kartaa dusha sare ee qalabka shaqada, oo waxaad heli kartaa dusha sare ama muraayadda muraayadda
Waxay ka baaraandegi kartaa xoog kasta oo sarreeya, ad-adayg sare, ad-adayg sare, jajabin sare iyo nadiifin saa'id ah oo wax lagu socodsiiyo; Ma jiro xoog farsamo cad inta lagu jiro howsha, waxayna ku habboon tahay farsamaynta shaqooyinka adag ee adag iyo qaababka wanaagsan
Kaliya ma beddeli karto hannaankii farsamo ee asalka ahaa ama cilladaha dusha sare, si wanaagsan u daboolaya qaabka farsamada iyo caaryada cilladaha wax soo saarka, laakiin sidoo kale waxay leedahay saameyn qurxin muuqaal qurxan
Birta, galaaska, dhoobada
Birta, dhoobada, dhalada
Qalabka wax lagu dhaqo sida biraha
Bir, akril, PC, PET, galaas
Sandblasting waa geedi socod u adeegsada hawo cufan ama biyo si loo wado qaybo adag oo lagu garaaco dusha sare ee qalabka shaqada qaab loo qaybiyey si loo gaadho nadaafad ama qalafsanaan. Ujeeddooyinka waxqabadka sida ka-goynta miridhku, xoqidda maqaarka, nadiifinta, iwm laguma wada hadli doono halkan. Codsiga tiknoolajiyada muuqaalka ayaa inta badan looga hadlay halkan. Geedi socodka guud ee sandblasting waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo dusha matte / matte / ciid.
Sandblasting waxaa lagu dabaqi karaa dusha sare ee dhammaan qalabka shaqada oo ay ku jiraan balaastikada, biraha, dhalooyinka, dhoobada, iwm.
Sawir gacmeedka ayaa ku dhowaad ka mid ah hababka qurxinta birta ugu caansan. Nidaamka sawir qaadista waxaa lagu arki karaa biraha, gaar ahaan birta birta ah, dhoobada iyo qalabka caagga ah.
Sawirka siligga guud ahaan waxaa ka mid ah shiidiida jirka, xardho CNC iyo leysarka, iwm. Saamaynta ay ku gaareen habab kala duwan ayaa sidoo kale aad u kala duwan, kharashkuna sidoo kale wuu ka duwan yahay.
Rolling, sidoo kale loo yaqaan knurling, waa geedi socod aad u da 'weyn. Mindida loo yaqaan 'knurling mindi' ayaa loo isticmaalaa in lagu daro qaabab gargaar oo toosan ama shabag u eg dusha sare ee shaqooyinka biraha silsiladda ah si loo kordhiyo khilaafaadka loona fududeeyo hawlgalka. Si kastaba ha noqotee, baahiyaha sharraxaadda dadweynaha, sharraxaadda geeddi-socodka ayaa si tartiib tartiib ah u kordhay, shaqada qurxinta ee alaabada qaarna way ka weyn tahay waxqabadka dhabta ah.
Xardhka CNC waa adeegsiga CNC oo loo rogo loona xardho dusha sare ee qalabka shaqada. Burushka iyo qaababka CD-ga ee la soo saaray waa nadiif, nidaam iyo joogto ah. Buuggan waxaa loogu yeeraa (texture process) Intaa waxaa dheer, qaababka xardhan ee CNC ayaa sidoo kale xakamayn kara qoto dheer si ay u soo saaraan saamayn gargaar.
Nadiifinta waxaa loola jeedaa isticmaalka farsamooyinka, kiimikada ama saameynta korantada si loo yareeyo dusha sare ee qalabka shaqada si loo helo dusha sare ee dhalaalaya. Waa adeegsiga qalabka wax lagu nadiifiyo iyo walxaha wax lagu nadiifiyo ama warbaahinta kale ee wax lagu nadiifiyo si wax looga beddelo dusha sare ee qalabka shaqada.
Nadiifinta farsamada ayaa ah hab nadiifin ah oo ku tiirsan goynta iyo cilladaha balaastigga ah ee dusha sare ee walxaha si looga saaro qaybaha isdabajoogga ee la safeeyey si loo helo dusha sare ee siman. Guud ahaan, ulaha dhagxaanta saliidda, giraangiraha dhogorta, warqadda ciida, iwm, iyo howlaha gacanta ayaa ugu muhiimsan.
Habka ugu-saxsan ee saxda ah ayaa loo isticmaali karaa shuruudaha tayada sare ee dusha sare. Nadiifinta saxda ah ee 'Ultra-sax' waa adeegsiga qalab gaar ah oo xoqan, oo lagu cadaadiyo dusha sare ee qalabka shaqada ee dareeraha nadiifiya oo ay ku jiraan walxaha loogu talagalay wareegga xawaaraha sare. Adeegsiga tikniyoolajiyaddan, dusha sare ee Ra0.008μm waa lagu guuleysan karaa, taas oo ah tan ugu sarreysa hababka kala-nadiifinta ee kala duwan. Habkani waxaa badanaa loo isticmaalaa qaabeynta muraayadaha indhaha.
Nadiifinta dareeraha waxay ku tiirsan tahay dareeraha qulqulaya ee xawaaraha sare leh iyo walxaha xoqan ee ay qaado si ay u dhaqdo dusha sare ee qalabka shaqada si loo gaaro ujeedka nadiifinta. Hababka sida caadiga ah loo isticmaalo ayaa ah: ka shaqeynta diyaaradda xoqan, soo saarista diyaaradda dareeraha ah, shiididda hydrodynamic iyo wixii la mid ah.
Shiidi Hydrodynamic waxaa wada cadaadis Haydarooliga si ay u sameyso dareeraha dhexdhexaadka ah ee qaada walxaha xoqan ayaa dib iyo gadaal ugu qulqulaya dusha sare ee qeybta shaqada xawaare sare. Dhexdhexaadiyaha dareeraha ah waxaa badanaa laga sameeyaa xeryo gaar ah oo leh socodka wanaagsan ee hoos yimaada cadaadiska hoose oo lagu qaso abrasives. Abrasives waxaa laga samayn karaa budada silikoonka carbide.
Shiidi magnetic iyo safeeyey
Nadiifinta maaddada 'magnetic abrasive' waa in loo isticmaalo birlabyada magnetic-ka ah si ay u sameysato burushyo xoqan hoosta ficilka aagga birlabta si ay u shiideyso qaybta shaqada. Faa'iidooyinkeedu waa waxtarka farsamaynta sare, tayo wanaagsan, xakamaynta fudud ee xaaladaha ka baaraandegidda iyo xaaladaha shaqada ee wanaagsan. Adoo adeegsanaya abrasives ku habboon, dusha sare ee dusha sare ayaa gaari kara Ra0.1μm.